नेतृत्वको कमजोरीका कारण काँग्रेस समस्यामा : डा. शेखर कोइराला - Durbin Nepal News
नेतृत्वको कमजोरीका कारण काँग्रेस समस्यामा : डा. शेखर कोइराला
दूरबिन नेपाल १३ आश्विन २०७६, सोमबार १२:०४
चितवन, १३ असोज : नेपाली काङ्ग्रेसका नेता डा शेखर कोइरालाले जागरण अभियानले काङ्ग्रेसका कार्यकर्तामा ऊर्जा थपेको बताउनुभएको छ । पत्रकारहरुसँग आज यहाँ कुराकानी गर्दै उहाँले जागरण अभियानले कार्यकर्तामा ऊर्जा थपेको भन्दै यसलाई थप उचाइमा पुर्याउन जतिसक्दो छिटो पार्टीको महाधिवेशन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
१३ आश्विन २०७६, सोमबार १२:०४ मा प्रकाशित